Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » बसको ढोकामा उभिएर चुरोट तान्दा ज्या’न गयो !
बसको ढोकामा उभिएर चुरोट तान्दा ज्या’न गयो !
काभ्रे – विपी राजमार्गमा एकजना यात्रुको मृ त्यु भएको छ । विपी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपाकिला–११ तिरतिरेमा बसबाट ख से र हिजो शनिबार एकजनाको ज्यान गएको छ । बसको ढोकामा उभिएर चुरोट पिउने क्रममा ढोकाबाट ख स्दा ४२ वर्षिया खड्गनारायण श्रेष्ठको ज्या न गएको हो ।
कांकडभिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना ६ ख ९१३८ नम्बरको बसको ढोकाबाट खस्दा श्रेष्ठ ग म्भी र घाइते भएका थिए । ग म्भि र घाइते भएका श्रेष्ठलाई थप उ’प’चा’र’का लागि धुलिखेल अ’स्प’ता’ल लगिएको थियो । उनको उपचारका क्रममा मृ त्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
झापा तोपगाछी–७ का श्रेष्ठ गाडीको ढोका छेउमा उभिएर चुरोट खाँदै गरेको अवस्थामा हात फु त्के र ल डे को प्रहरीले जनाएको छ । बस र चालकलाई नि य न्त्र ण मा लिएर आवश्यक अ’नु’स’न्धा’न भइरहेकोे प्रहरीले बताएको छ ।
तपाईंलाई यो पोस्ट कस्तो लाग्यो ? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला ,सचेतनाको लागि शेयर गर्नुहोला । थप जानकारीको लागि हाम्रो वेब साइटमा जानुहोस धन्यवाद ।